> Resource> Video> Olee naghachi ehichapụ Videos si SD Kaadị
Ẹkeme Naghachi ehichapụ Videos si My SD Kaadị?
Hi n'ebe ahụ, m nwere Kingston SD kaadị na-etinye ọtụtụ videos n'ime ya. M nwere n'ezie nnukwu nsogbu na nso nso. M na-ezighị ehichapụ 3 video si m SD kaadị nke ga-amasị m iji weghachi ọzọ. Ọ dị onye ebe a na a ịga nke ọma akụkọ na-esi naghachi ehichapụ video si SD kaadị?
Azịza ya bụ nnọọ ee. Gị ehichapụ videos na-adịghị na-adịgide adịgide okụrede gị SD kaadị. Ha na-dị nnọọ ịghọ keerughi tupu ọhụrụ data ekpuchi ha. Nke a pụtara na ị chọrọ ka ị na-SD kaadị ejibeghi ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi ehichapụ videos site na ya. Na mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịbịa internet ịchọta a data mgbake omume na-enyere gị aka.
M ji obi umeala nwere ike ikwu Wondershare Photo Recovery ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac maka gị. Ọ bụ kacha oke naghachi furu efu vidiyo si na SD kaadị, n'agbanyeghị na video na-efu n'ihi usoro njehie, kaadị formatting ma ọ bụ na mberede nhichapụ. Ihe niile ị chọrọ ime bụ jikọọ gị SD kaadị na kọmputa na-agba ọsọ Wondershare Photo Recovery ịchọ furu efu videos na ya.
Ị nwere ike nweta a ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery ugbu a. Biko họrọ nri version maka gị os. Plus, a ndu dabeere na Windows version nke Wondershare Photo Recovery. Mac ọrụ ike hazie mgbake na yiri nzọụkwụ na Mac version.
3 Nzọụkwụ ịrụ SD Kaadị ehichapụ Video Iweghachite
Nzọụkwụ 1 Jikọọ SD kaadị nke gị videos na-efu site na kọmputa gị na-agba ọsọ Wondershare Photo Recovery. Ị ga-ahụ a mmalite interface na-egosiputa niile na-akwado ngwaọrụ. Ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" na-amalite mgbake.
Cheta na: Jide n'aka na gị SD kaadị nwere ike ọma ejikọrọ na kọmputa gị. Ma ọ bụghị nke a omume nwere ike na-adịghị aghọta na ike iṅomi ya.
Nzọụkwụ 2 All ike draịva gị, gụnyere SD kaadị na kọmputa gị ga-egosipụta site na nke a usoro. Naghachi ehichapụ videos si gị SD kaadị, ị dị nnọọ mkpa ịhọrọ gị SD kaadị na pịa "iṅomi" anya n'ihi na furu efu videos na ya.
Nzọụkwụ 3 Mgbe iṅomi okokụre, niile hụrụ faịlụ, gụnyere ehichapụ vidiyo na SD kaadị ga-scanned na-egosipụta na-ekpe nke windo. Ị nwere ike ịlele faịlụ aha ego ma ha bụ ndị ihe ị chọrọ iji weghachite ma ọ bụ.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ videos gị mkpa ma pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Rịba ama: Unu zọpụta ya azụ gị SD kaadị n'oge mgbake.
Top 15 égwu na Tinye Music ka Videos
Top 10 Ngwa Motion Software
Top 5 HD (High-definition) Video edezi Software
Video Ime Software maka Mavericks: Mee Video na OS X Mavericks
Olee otú Download Online Movies na a Click
Olee otú iji tọghata Deezer ka MP3